Soomaaliya oo dacwad u gudbisay Maxkamadda Qaramada Midoobay. - Wargeyska Faafiye
Soomaaliya oo dacwad u gudbisay Maxkamadda Qaramada Midoobay.
Dowladda Soomaaliya ayaa maxkamadda sare ee Qaramada Midoobay ka dalbatay in go’aan ka gaarto xadduudda Badda Soomaaliya ay la wadaagto dalka deriska la ah ee Kenya.
Soomaaliya ayaa dacwadda u gudbisay maxkamadda caalamiga ee caddaaladda, Khamiistii shalay,si labada waddan ay u aqoonsadaan xudduudda sax ah ee ay kala leeyihiin xalna loogu helo muranka taagan, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP.
Codsiga ay Soomaaliya u gudbisay maxkamadda ayaa dhigaya in labada waddan ay ku muransan yihiin halka ay ku taallo xuduudda badaha labada dal, isla markaana dedaallada diblumaasiyadeed ay ku guul darreysteen in ay heshiis ka gaaraan arrinta.
Go’aan ka yimaada maxkamadda Hague ee la xiriira guddiga garsoorka ee Qaramada Midoobay ayaa noqonaya midka ugu dambeeya ee xal loogu heli karo muranka xudduud badeedka ee ka dhex aloosan Soomaaliya iyo Kenya.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsMadfac ku habsaday dad barakacayaal ah.Shirkii dastuurka oo furmayPolice charge nine after derby.Gabar, 30 jir Cancer qabta oo gargaar u baahanM/Shariif oo natiijo ka gaaray xildhibanada la diiday.